people Nepal » अबकोअर्थमन्त्री को ? दौडधुपमा काजी देखि पौडेलसम्म ! अबकोअर्थमन्त्री को ? दौडधुपमा काजी देखि पौडेलसम्म ! – people Nepal
Posted on September 4, 2020 September 4, 2020 by Durga Panta
काठमाडौं, १९ भदौृ। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेकपाबा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बनाउने नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेपछि भोलीदेखि अर्थमन्त्री पद रिक्त हुने भएको छ ।
साढे २ वर्षसम्म विना कुनै राजनीतिक त्याग अर्थमन्त्रालयमा रजगज गरेका खतिवडाको कार्यकाल अब सकिएको छ । योसँगै अब अर्थमन्त्री को होला भन्ने चर्चा शुरु भएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार गौतम यदि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनिहाले भनेपनि मन्त्रि बन्न सहज छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले उनको मन्त्री बन्ने अभिलाशामा समेत तगारो राखिदिएको छ ।
संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनेसम्बन्धी उक्त धाराको उपधारा ४ मा लेखिएको छ– प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’
त्यसो त गौतम अर्थमन्त्री बन्न नसके विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री बन्ने प्रबल संभावना छ । यद्धपी बालुवाटार जग्गा प्रकारणमा उन्मुक्ति पाएका उनलाई भूमि सुधार मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै सामाजिक संजालमा व्यंग्य हुन थालेको छ ।
यद्धपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अत्यन्त निकट व्यक्ति भएका कारण पौडेलको संभावना बलियो छ ।
अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि छन् । उनले आफूले पनि अर्थशास्त्रमा मास्टर गरेको हुँ भन्दै हिँड्न थालेका छन् ।
पूर्व मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने नेकपा भित्र आम कार्यकर्ताको माग छ । यद्धपी उनीमाथि माधव नेपाल समुहमा लागेको आरोप छ । सोही कारण उनको संभावना कम रहेको आंकलन गरिएको छ ।